'Deep Blue Sea 3' Trailer Chums Mmiri Maka Digital Hapụ
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Deep Blue Sea 3' Trailer Chums Mmiri maka Digital Hapụ
by Timothy Rawles June 17, 2020 1,278 echiche
The Oke Osimiri Blue aha amabeghị ndagwurugwu ma ihe ọzọ na 1999 thriller na-eme ụzọ dijitalụ na vidiyo ụlọ.
Ọ bụ naanị afọ abụọ gara aga na mmiri gbara agba ọzọ Oke Osimiri Blue Blue 2, ihe ịga nke ọma maka VOD.
N’isi nke atọ, Oke Osimiri Blue 3, nke edobere ka ọ daa na dijitalụ July 28, 2020, na Blu-ray / DVD August, 25, anyị na-agbaso ọkà mmụta ihe banyere mmiri bụ Emma Collins (Tania Raymonde) bụ onye na-achịkọta ndị ọrụ ma were ha na ozi iji chọpụta obodo agwaetiti mmiri dara. n'etiti oké osimiri ebe ha na-eme atụmatụ ide akwụkwọ ebe mbụ White White mating ebe.
"O di nwute (onye na-apụnara mmadụ ihe), Bull Sharks ndị gbasiri ike na Deep Blue Sea 2 nọkwa na ebumnuche evolushọn nke ha: ịzụlite ozuzu na nnukwu White White ngwa ngwa.
Onye nlekọta ozi ahụ, Richard Lowell, kwenyere na Bull Sharks nwere isi ihe na nkwalite ọgụgụ isi, nke ọ na-ezube na nzuzo iji ree maka nnukwu uru. Ugbu a, Emma na ndị ọrụ ya tọrọ atọ n'ụlọ siri ike nke na-eme mkpọtụ nke ga-erugharị n'ụsọ oké osimiri, n'etiti anụ na-eri anụ n'elu na n'okpuru mmiri. "
Onye isi oru, Tom Keniston kwuru na "anyi nwere obi uto na oganihu nke ihe nchoputa ya" Oke Osimiri Blue 3 anyị na-enwe ike iru na ihe ịga nke ọma nke aha ya na akụkọ ohuru nke ga-enye ndị na-ege ntị ihe ụtọ niile na obi ụtọ ha na-atụ anya site na Oke Osimiri Blue ihe nkiri. ”
Enwere ụfọdụ ndị na-akụ ike n'azụ nkeji nke atọ a:
Ọ bụ John Pogue na-eduzi yaThe Ndị dị jụụ) na onye dere ya site Dirk Blackman (Obodo ọzọ). Tom KenistonOke Osimiri Blue 2) na-eje ozi dị ka onye isi ọrụ na Hunt Lowry (Onyinyechi Nwachukwu) na Patty Reed ()Obodo di ocha) maka Roserock Films na onye na-ese ihe nkiri, Michael Swan.
Nke a ọ ga-abụ nku azu-ọbụ na anyị na-eche?
Oke Osimiri Blue 3:
Ntọhapụ dijitalụ: Julaị 28, 2020
Ntọhapụ Blu-ray / DVD: August 25, 2020
BD na DVD E gosipụtara ya na 16 × 9 na ntanetị
Oge Oge: Njirimara: Approx. Nkeji 99
Ọdịnaya enwetara: Approx. Nkeji 10